အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ ကျွန်တော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ ကျွန်တော်
ကျွန်တော် က ခပ်အေးအေးပဲ နေတတ်တော့ သူငယ်ချင်း နည်းနည်းပါးပါးလောက် ပဲရှိပါတယ် ။ မူလတန်းကတည်းက အထက်တန်းအထိ တွဲ လာ တဲ့သူတွေထဲ က ကျော်နိုင့် ကို တော့ အခင်ဆုံးပါပဲ ဆယ်တန်းမအောင်မချင်း ရည်းစားမထားဘူးလို့တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပြီး စာ ကို ပဲ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်
ဆယ်တန်းလဲ အောင် ရော် သူ က ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့ကျောင်းဆက်မတတ် နိုင် ဖြစ်ရာ ကနေ ခုထိတက္ကသိုလ် ဆက်မတက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ တကယ်တော့သူက ကျွှန်တော့ထက် တောင် ပို တော်ပါတယ် သူသာ သူဖြစ်ချင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာ ကြီးဖြစ်ခဲ့ ရင် တိုင်းပြည်ကအားထားရတဲ့ ထူးချွှန်တဲ့ သူတယောက်ဖြစ်မှာ သေချာ ပါတယ် ခုတော့ သူ လက်သမား အလုပ် လုပ်နေပါတယ် အထင်တော့သေးလို့ မရဘူးနော် သူ့ မိသားစု ခြောက်ယောက် အဖေအမေ အပါအ၀င်ကို လုပ်ကြွေးနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော် ကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းဆင်းပြီး အခြေနေအရ ၀န်ထမ်း လုပ်ခဲ့မိတယ် အင်ဂျင်နီယာ ပညာ တတ် ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အသုံးအဖြုန်းလဲ မရှိ အသောက်အစားလဲ ကင်းပါရဲ့ နဲ့အိမ် ကို ပြန်မထောက်ပံ့ နိုင်ပါဘူး မိဘနဲ့ရပ်ရွာ ကို ခွဲပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အပြင် အိမ်ပြန်ဖို့ ငွေမလုံလောက် တဲ့အတွက် မပြန်ရတာလဲ ကြာ ပါပြီ။ အလုပ်ထွက်ရမှာလား လာဘ်စားရမှာလား
လူကြီးတွေကို အပြစ်တင်ရမှာလား ကို့ ကိုယ် ကို အပြစ်တင်ရမှာလား သူငယ်ချင်း ရေ မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေး သတိရမိပါတယ် ပညာရှာတိုင်း ဥစ္စာ ရတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့
မိုးပွင့်လည် အိမ်ကပြန်လာစေချင်ရင် သူတိုပိုတဲပိုက်ဆံနဲပြန်ရတယ်
သူငယ်ချင်ရေ မိုးပွင်တို့လက်ထက်လဲရောက်လာမှာပါ ဒီတိုင်းပဲတောမနေလောက်ပါဘူး
သူငယ်ချင်းက ဆရာဝန်။ မိဘမောင်နှမတွေကလည်း ပြည့်စုံ၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း တကိုယ်တည်းမို့ သူ့ဝင်ငွေနဲ့သူ နေနိုင်တယ်။ သူ့ ညီမလေးက သူ့လို စာမတော်ဘူး။ ဘွဲ့လေးတခုရပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးလုပ်တယ်။ သူ့မောင်လေးက သဘောင်္လိုက်တယ်။ မောင်နှမတွေအားလုံးထဲမှာ စာအတော်ဆုံးဖြစ်ပေမယ့် ခုလတ်တလောမှာတော့ မောင်နှမတွေလို မသုံးနိုင်၊ မဖြုန်းနိုင်၊ မျက်နှာငယ်ရလို့ ငါငယ်ငယ်က လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ စာကြိုးစားမိတာ မှားတယ်တဲ့လေ။
ဒို့ကမမှဖြင့် ကွန်ပြူတာဘွဲ့ကြီးကိုင်ပြီး …ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်မှန်းမသိ
အခုမှ developer ဆိုတဲ့နေရာ ရပေမဲ့
လစာလေးက 150000 လေး….
တောင်ကြီးက သူငယ်ချင်းကတော့ ရိုးရိုးဘွဲ့နဲ့ အဆောင်ဖွင့်စားတာ
အခုဆို တောင်ကြီးမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်နေပြီ….
ဆိုင်းဘုတ် (sign board) ရေးစားတဲ့ပညာဟာအကောင်းဆုံးပါ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့
ရုံးတွေမှာ ၊ကျောင်းတွေ၊ရပ်ကွက်တွေမှာ၊လမ်းတွေမှာ ဆောင်ပုဒ်တွေ အများကြီးရေးထားတာ၊
တိ၂ ကျ၂ မှန်၂ ကန်၂မြန်၂ဆန်၂လုပ်၊ခြင်ကျားကင်းစင်ကျောင်းတဲ့၊လောင်းကစား ကင်းစင် ရပ်ကွက်တဲ့၊ ယာဉ်တိုက်မှုကင်းမဲ့ဇုန်တဲ့။ ရုံးမှာ ဦးတည်ချက် (၁၂)ရပ်တို့ဘာတို့၊အခြားဘာညာတွေ
ရေးရတဲ့ စရိတ်က တနှစ်တနှစ် မနဲဘူးဗျာ။